လမ်းလွဲလေးများမညွှန်စေချင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Environment » လမ်းလွဲလေးများမညွှန်စေချင်
Posted by ကို သာ on Jun 25, 2012 in Environment | 11 comments
တောရောြမြိိုု.ပါရှိကြပါတယ်။ လမ်းညွှန်တယ်ဆိုကတည်းက လမ်းမှားရောက်မှာစိုးလို.ပါ။
လမ်းညွှန်တာမှားယင်တော.လမ်းမှားရောက်တော.မှာပေါ.။ ဇဝေဇဝါဖြစ်အောင် ညွှန်ယင် သွားရတာဇဝေဇဝါဖြစ်နေမှာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြိိုု.ကြီးက ဇဝေဇဝါ လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ် အချိုု.ကြောင်. စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်မိလို.ပါ။သာမာန်လူတွေရဲ. လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ်မဟုတ်ပါ။မြို.တော်စည်ပင်ကလုပ်ထားတဲ. လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ် အချိုု.ပါ။
ပုံပါ လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ်ကိုကြည်.ပါ။ ဇဝေဇဝါဖြစ်သွားသလား။
ပြည်လမ်းအတိုင်းရန်ကုန်ကိုဝင်လာလို. စော်ဘွားကြီးကုန်းလမ်းဆုံရောက်ပြီးဘယ်ဖက်ကိုသွားယင်ပြည်လမ်း၊ညာဖက်ကိုသွားယင် လမ်းသစ်လမ်းပါ။
ဘယ်ဘက်ကမျှားထိပ်မှာ ပြည်လမ်း၊ ညာဘက်ကမျှားထိပ်မှာ လမ်းသစ်လမ်းဆို ပိုရှင်းမလားလို.။
ဒါမျိုး ဆိုင်းဘုတ်တွေ တော်တော်များများရှိပါတယ်။
ပြန်စစ်ကြည်.စေချင်ပါတယ်။ တော်နေကြာ လမ်းမှားရောက်သွားမှဖြင်.။
ဓါတ်ပုံ ကို ပထမဆုံး တင်ကြည်.တာမို. နည်းနည်းဖြည်.ကြည်.ပေးပါ။တင်မယ်ဆိုယင်အလွဲပုံတွေတစ်ပုံကြီးရှိပါတယ်။ကျေးဇူး။
အဲဒီက ခရီးသည်တွေ လမ်းမှားစီး ကုန်မှဖြင့် ဒုက္ခအတော်များကုန်မယ်
အမြန်ဆုံးပြင်ပေးဖို ့၊ ဂေဇက်ကနေ အော်လိုက်ပါအိ…
ကိုသာရေ ညီမဆို လမ်းညွှန်တွေ့ကြည့်ပီး မျက်စိလည်ပေါင်းများပီပေ့ါ …… တစ်ခါတစ်လေ လမ်းညွှန် ရှာရင်း မီးပွိုင့်တွေမှာလမ်းကြောင်းမှားယူမိတဲ့အထိတောင်ဖြစ်သေးတယ် လမ်းညွှန်တွေ့ချိန် ကိုယ်ကလမ်းကြောယူပီးချိန်ဖြစ်နေပီလေ …… လမ်းညွှန်တွေကို မီးပွိုင့်လမ်းကြောင်းမယူခင် ခင်လှမ်းလှမ်းမှာ ထားရင်ပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် ..
့ဘရာကြော်ပါ ကိုသာရေ .. တွေ့ ရင် တင်သင့်ပါသည်။
ဒါဆို တစ်ချပ်လုံး ပြန်ကပ်ရမျာ စိုးရင် အလယ်မှာ မျဉ်းဖြူထင်ထင်ရှားရှားခြားပေးလိုက်ရင် နဲနဲ သက်သာမယ် ။
ခိုင်ခိုင်ပြောသလိုဘဲ ဆိုင်းဘုတ်များက အနားကပ်မှဖြစ်နေလေ့ရှိပါတယ် ။ ကျွန်တော့် အထင်တော့ ရှေး ထုံးနဲ့ သွားနေတယ်လို့ထင်ပါသည်။ အရင် က ကားတွေ ရှင်း၊ မြန်မြန်လည်း မောင်းမရတော့ အနားကပ်မှ ပြတာ ပြဿနာ မရှိပေမဲ့ အခုခေတ်ကားတွေကများ မြန်လည်းမြန်လာတော့ အရင်လို အနီးကပ်မှ မဟုတ်ဘဲ သင့်တော်မဲ့ အကွာအဝေးဖြစ်သင့်ပါသည်။
စည်ပင်တွေက ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် စည်းကမ်းမဲ့တွေ လိုက်ဖမ်းတယ်။ အရေးယူတယ်။
သူတို ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေ အရင်ဆုံးစည်းကမ်းတကျဖြစ်အောင်လုပ်သင့်တယ်။
(၁) မီးပွိုင့်တွေ ပုံစံမျိုးစုံတပ်ထားတယ်။ အချက်ပြစနစ်က မျိုးစုံပဲ။ “ စံ ” တစ်ခုခုတော့ သတ်မှတ်သင့်ပါတယ်။
ပျက်တဲ့ မီးပွိုင့်တွေ ချက်ချင်း ပြင်ဖို ့လိုတာ တစ်ပတ်ကျော်လည်းမပြင်၊
ယာဉ်အန္တရယ်တွေ မဖြစ်အောင် စည်ပင်မှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။
(၂) လမ်းတွေပျက်စီးနေတာ အဓိကတရားခံ စည်ပင်ပဲ။
(၃) လမ်းဘေးဈေးသည်တွေ စည်းကမ်းမဲ့ရတာလည်း စည်ပင်ကြောင့်ပဲ။
နောက်ဆိုရင် ယာဉ်အန္တရယ်တွေဖြစ်တဲ့အခါ မီးပွိုင့်ကြောင့်၊ လမ်းပျက်စီးတဲ့အတွက်ကြောင့်၊
စည်ပင်ရဲ့ ပယောဂတစ်ခုခုကြောင့် ဖြစ်ခဲ့ရင် စည်ပင်ကို တရားစွဲဖို ့ဥပဒေ ရေးဆွဲသင့်တယ်။
စည်းကမ်းမဲ့ စည်ပင်ကို ဘယ်သူအရေးယူမလဲ။
ဓါတ်ပုံတွေ.မှ သတိထားမိတယ်၊ လမ်ညွှန်အတိုင်း သွားလို.ကတော. တလွဲပဲ။ အပေါ်ခြမ်းနဲ. အောက်ခြမ်းကို မျဉ်းတားထားပေးရင် တော်သေးတယ်နော်။
တင်ပေးတဲ့ အတွက်လည်း ချီးကျူးပါ၏။